Beddelaadaha Garageband ee ugu Fiican ee loogu talagalay Android (2020) - Barnaamijyada
Weli, xisaabinta midkee kuugu habboon beddelka Garageband?Hagaag, waan helnay dhabarkaaga.Tufaax Inc waxaa lagu sii daayay Garageband sanadkii 2004. Waxaa laga heli karaa dhammaan meheradaha kala duwan. MacOS ayaa maamusha, macruufka ayaa maamula, xitaa iPadOS ayaa maamula, laakiin ma jiro wax la yiraahdo Garageband oo ah illaa iyo hadda markay timaaddo Android. Maxaa la sameeyaa kiiskan? Ha welwelin.
Xitaa haddii uusan jirin Garageband rasmi ah oo loogu talagalay Android, waxaa jira waxyaabo badan oo beddel wanaagsan oo aad isticmaali karto. Waxaan kugu soo qaadan doonnaa xulashooyinka ugu fiican si ay kuugu fududaato inaad ka dhex doorato.
Garageband waa DAW (Digital Audio Workstation) oo u roga aaladaha ay ku shaqeeyaan warshad muusig. Waxay ku dhex leedahay qalab macmal ah. Waxaad ku sameyn kartaa nooc kasta oo qoraal ah qalabkan adigoon dhab ahaan u ciyaareynin, sidaas darteed, xitaa haddii aadan aheyn muusikiiste, waxaad noqon kartaa soo saare. Dhawaaqyada ka imanaya Garageband ayaa loo isticmaalay megta-hits ee Rihanna, Usher, Grimes, iwm waxaa si ballaadhan u adeegsada soosaarayaasha EDM, kuwa bilowga ah, iyo xirfadlayaalba.
10 Bilaash Bilaash ah Softwares
Barnaamijyada ugu fiican ee Android Music Player
Hoos waxaan ku taxnay xulashadayada ugu fiican ee Garageband loogu talagalay AndroidOS.
Top Picks ee Garageband Beddelka loogu talagalay Android (2020):
Muusig sameeyaha Jam
FL istuudiyaha wareega
Diiwaanhayaha J4T Multitrack
Marka aan faahfaahinno faahfaahinta.
1. Muusig sameeyaha Jam
Barnaamijkan oo ka socda soo-saareyaasha Loudly GmbH, waxaad isla markiiba abuuri kartaa muusig una sii deyn kartaa malaayiin kale oo isticmaalayaasha MMJ ah oo adduunka ku baahsan. Waa super user saaxiibtinimo, oo aan loo eegayn haddii aad tahay qof bilow ah ama xirfadle ah, waa mid aad u habboon in la isticmaalo. Haddii aad tahay isticmaale Ex Garageband, markaa tan ayaa kuugu habboon adiga.
Xog keedkeedu wuxuu ka buuxan yahay wareegyo laga soo xulay noocyo fara badan sida EDM, Dubstep, House, Hip-Hop, Rock, Pop, iwm.Iyada oo sideed-channel fiicnihiisa, fursadaha waa dhammaad lahayn. Waad sameyn kartaa muusig aad u fiican sidoo kale waxaad isku dari kartaa heesaha socdaalka xafladda saaxiib.
Barnaamijka waxaa lagu qiimeeyay 4.6 / 5 dukaanka Google play.
Muusiga Sameeyaha Jam wuxuu ku siiyaa waxyaabo astaamo ah abka dhexdiisa. Aynu eegno qaar ka mid ah.
Tweak Tempos & iswaafajinta oo isticmaal saamaynta dhawaaqa muhiimka ah sida turuntada, daahitaanka, iyo Dib u noqoshada.
Heesaha Remix. Iyada oo ah muuqaal xiiso leh oo xiiso leh oo kuu oggolaanaya inaad remix ku celiso raadadka adoo ruxaya qalabkaaga.
U adeegso codadkaaga la duubay garaacaaga gaarka ah isla markaana adigu gaadhsii si aad uhesho sixir.
La wadaag heesahaaga isla markiiba warbaahinta bulshada oo dhan si fudud oo dhaqso ah.
Ku soo biir bulshada Muusikada Muusigga ah ee Jam, oo leh ilaa 6 milyan oo heeso oo laga soo galiyay.
Muusiga sameeyaha Jam waa u bilaash inuu ka soo dejisto google play store. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira iibsasho-app si loo helo dhammaan sifooyinka caymiska.
2. istuudiyaha n-track
N-Track Studio waa istuudiyaha wax lagu duubo oo dhan oo ku jira jeebkaaga. Waxaad duubi kartaa tiro aan xad lahayn oo heeso ah iyo sidoo kale MIDI kuwan raadkaygay. Waxay leedahay tanno tijaabo ah oo aan boqortooyo lahayn. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho Gitaarka Amps oo ay weheliso dib u habeynta Vocal iyo Reverbing.
Waxay ku rakibtay aalado Virtual ah, laakiin waxaad ku xiri kartaa qalabka jirka dibedda haddii aad rabto.
Abka waxaa lagu qiimeeyay 4.2 / 5 dukaanka Google play.
n-Track waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee lagu soo raray DAW ee ku yaal barnaamijka Android. Waa kuwan qaar ka mid ah astaamaha muhiimka ah
Qalabka la dhisay oo taageera MIDI raadadka
Kuu ogolaanayaa inaad sameyso Dib-u-rogis, Chorusing, Flangering, Phasing, Tube Amplifying, Echoing, Pitch Shifting, iwm.
Qalliinka goos gooska iyo Cod-u-habeynta codadka codka macaan.
Awood u leh dejinta inta jeer ee Sampling illaa 192 Kilohertz.
Plugins of all nooc si loo kordhiyo qalabkaaga soo galintooda
Beel gaar ah oo internetka ah oo farshaxanno leh dhammaan calibers.
Marka laga reebo nooca bilaashka ah, waxay haystaan ​​3 rukun oo aad kala dooran karto
Diiwangalinta istaandarka ah:biilasha $ 0.99 bishiiba.
Kordhinta rukunka:biilasha $ 1.99 bishiiba.
SUITE rukun:biilasha $ 3.99 bishiiba.
Barnaamijkan abaal-marinta ku guuleysta ee Android wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka shaqeyso waddooyinka dibedda laga soo dhoofiyo ama aad ka abuurto raadad u gaar ah xoq Iyada oo la heli karo hal tan oo baakad muunad bilaash ah noocyada sida Dubstep, House, Trance, Rock, iwm.
BandLab waxay leedahay xarun kaydinta daruur aan xadidnayn oo loogu talagalay isticmaaleyaasheeda. Tani waa wax fudud. Uma baahnid inaad ka walwasho qaadista USB-yadaaga meel kasta oo aad tagto. Xitaa waad ka soo gali kartaa koontadaada Android goobta Desktop-ka oo aad ka shaqeyn kartaa mashaariicdaada.
Abka waxaa lagu qiimeeyay 4.4 / 5 dukaanka Google play.
Waa wax lagu qoslo in barnaamij bilaash ah uu bixin karo astaamahan oo kale, aan dalxiis galno.
12 tifaftiraha isku qasida wadada, si sax ah ayaad u aqrisay, 12 track ayaa lagu qasi karaa waqti go'an BandLAb. Taasi gabi ahaanba waa wax la yaab leh barnaamij bilaash ah.
In kabadan tan tan alaabooyinka MIDI-ga ah sida Drums, Guitars, Keyboards, iwm.
Muuqaalka Mastering-ka ee la dhisay, oo si otomaatig ah u xakameeya waddo kasta.
In kabadan tan tan hore ee Vocal-aan-boqornimada-lahayn
Xirmooyinka dhawaaqa horay loo soo raray si loo soo saaro jeexjeexyo cusub oo loogu talagalay abuurayaasha xulasho ballaaran oo noocyo ah.
BandLab gabi ahaanba waa bilaash in la isticmaalo.
4. Kooxda Band
Istuudiyahaaga kula soco Walk Band. Barnaamijkan waxaa laga soo dejiyey in ka badan 50 milyan oo jeer Google Play store. Iyadoo la adeegsanayo 'Multitrack synthesizer' iyo codad tayo sare leh oo istuudiyaha ah, waxay ka dhigeysaa beddel wanaagsan Garageband-ka Android. Waxaad ka heli kartaa ilaa nus tan tan oo ah qalabka muusikada ee ku jira barnaamijka, kaas oo ku ciyaara kali kali koodhadh ah isla markaana jidh ahaan isku xira teebabka MIDI.
Waad duubi kartaa codkaaga, waxaad ku soo dejin kartaa barnaamijka, oo waad u madaxbannaan kartaa si aad uga dhigto mid u eg sixir.
Walk Band ayaa lagu qiimeeyay 4.2 / 5 dukaanka Google play.
Astaamaha muhiimka ah ee kooxda Walk Band ay tahay inay bixiso waa,
Qalabka sida Guitars, Drums, Keyboard-ka oo ku dhex jira.
Kartida lagu ogaanayo aaladaha ku xiran jirka.
U beddelashada ka MIDI ilaa qaab Mp3.
Codka lagu duubo makarafoonka lagu rakibay iyo toosinta otomaatiga.
Waa bilaash inaad kala soo baxdo dukaanka Google play waxayna ku siisaa wax ku iibsiga barnaamijka.
Ragga waawayn ee Computer DAWs waxay leeyihiin barnaamijkooda android si ay ula tartamaan Garageband ee Apple. Inc. Mashruucyada muusikada ee badan-socodka ah ayaa la abuuri karaa laguna keydin karaa qalabkaaga android-ka oo leh barnaamijka moobiilka ee FL Studio. Waad ka duubi kartaa codkaaga si toos ah ama ka soo dhoofsan kartaa kuwa horay loo duubay qalabkaaga kuna dar dariiqyo garaac leh oo aad ku abuuri karto qalabka dhismaha.
Waad rakibi kartaa waxyaabo dheeri ah oo ku dari doona astaamaha horay u jiray ee barnaamijka. Sida dhiggeeda PC-ga ah, mobilada istuudiyaha ee FL waxay leeyihiin soosaarayaal tayo sare leh iyo noocyo badan oo FX ah.
Abka waxaa lagu qiimeeyay 4.3 / 5 dukaanka Google play.
FL istuudiyaha moobiilka waxaa ka buuxa waxyaabo aad u wanaagsan sida nooca Desktop-ka, aan fiirino iyaga,
Soo rar faylasha WAV, FLAC & MP3
Taageero buuxda oo MIDI ah si loogu xiro qalabka jirka.
Baaxad weyn oo FX ah si kor loogu qaado wax soo saarkaaga
Cod duubista iyo soo dejinta iyadoo la raacayo taageerada Autotune oo leh presets.
Hal & Multitrack MIDI soo dejinta iyo sidoo kale dhoofinta.
Qiimaha loo isticmaalo nooca buuxa waa $ 14.99. (Nooca demo ayaa la heli karaa).
# 1 Garageband ma loo heli karaa Android?
Sanadaha:Maya, Garageband waxaa si gaar ah loogu heli karaa qaar ka mid ah aaladaha Apple. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo badan oo beddel weyn oo ku habboon, sida aan ku soo sheegnay qodobka kor ku xusan.
# 2 Ma jiraa nooc Desktop ah oo Garageband ah?
Sanadaha:Maya, sida Android oo kale, Garageband looma heli karo Desktops-ka aan ku shaqeynin MacOS. Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo wanaagsan oo loo heli karo kombuyuutarrada sidoo kale, oo lagu rakibo astaamo, qaarkoodna xitaa way ka fiican yihiin Garageband lafteeda.
# 3 Miyaan ubaahanahay barnaamij Garageband ah?
Sanadaha:Haddii aad tahay ammateur oo aad rabto inaad abuurto muusig markaad socoto, markaa hubaal haa. Haddii aad leedahay qalab Apple ah, Garageband ayaa horay loo sii rakibay, laakiin haddii aad tahay isticmaale android ah oo aad rabto inaad sameyso muusig, ma jirto hab lagu helo Garageband oo ku shaqeynaya qalabkaaga. Waxaa jira waxyaabo badan oo beddel weyn oo ku habboon, kor ayaan ku soo sheegnay. Way ka habboon tahay oo ka jaban tahay in la isticmaalo beddelkaas marka loo eego iibsashada qalab Apple ah oo qaali ah.
# 4 Waa kuwee xulashooyinka la soo sheegay ee ugu wanaagsan Mastering?
Sanadaha:Band Lab waa kan ugu fiican markay tahay Mastering heesaha. Waxay leedahay saddex goobood oo aad ku baran kartid raadraacaaga. Waa inaad soo gelisaa faylkaaga, Band Band-na wuxuu si otomaatig ah u hannaan doonaa raadraacaaga.
Dhammaan waxyaabaha kale ee la soo sheegay waa kuwo fiican oo tartan adag siiya Garageband. In kasta oo DAW kasta ay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo qasaarooyinkeeda, waxaad isku mar u wada isticmaali kartaa in ka badan mid ka mid ah beddelaadyadan oo waxaad heli kartaa natiijooyin aan caadi ahayn. Sameynta taasi wali way ka jaban tahay dhab ahaantii helitaanka qalabka Apple ee Garageband. Markaad isku darto DAW-yada kale, waxaad ka heli kartaa natiijooyin xitaa ka fiican Garageband. Ha badin wax badan, si hufan ula shaqee barnaamijyadan, oo muusikadaadu ha gaadho dadka badan. Waxaan rajeyneynaa inaan ka dhigney go’aankaaga mid aan ku fududeyneyno hagahayaga.Ha sugin mar dambe. Ku dhex milma DAW-yada oo u ogolow miyuusiggaaga gudaha inuu ku guuleysto.
5 Beddelka ugu Fiican ee iMovie ee Windows
Beddelka ugu Fiican ee CamScanner
Sida loo damiyo Raadi My iPhone?
samaacado iphone fiican la codbaahiyaha
sida aad u heli amazon xubin arday Ra'iisul
movies cusub si aad u daawato free
websites inuu ciyaaro kulan ee dugsiga
filimo cusub oo bilaash ah oo qadka toos u socda